PUBG မိုဘိုင်းသည်ဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူ Halloween ညကို ၀ တ်ဆင်သည် Androidsis
PUBG Mobile သည် Halloween အတွက် ၀ တ်ဆင်ထားသောဗားရှင်း 0.8.0 နှင့်ဆင်တူပြီးအသွင်အပြင်သစ်များစွာပါ ၀ င်သည်
PUBG မိုဘိုင်းသည်ထိုအရာအားလုံးကိုဆက်လက်ပေးအပ်ရန်ထပ်မံမွမ်းမံသည် ဒီ 'တော် ၀ င်တော် ၀ င်စစ်ပွဲ' ကိုကျူးလွန်သောကစားသမားများပိုပိုများလာတယ်။ ဒီနေ့ဂိမ်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့သတင်းတွေရောက်လာပြီ၊ လက်နက်တွေ၊ အရေခွံတွေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေပါ ၀ င်လာပြီ။
ကျနော်တို့ပြီးသားတစ်ပါတ်အကြာမျှဝေခဲ့သည် အားလုံး PUBG မိုဘိုင်းသတင်းများ၏ပြည့်စုံသောစာရင်း, ငါတို့ beta ကိုအတွက်ဒီရက်ပေါင်းစပြီးစမ်းသပ်ခဲ့ကြပြီ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးအကြီးဆုံးအရာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်သွားမည်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်အခြားအရာများအပြင်သင်နှင့်အတူတူပင်ဘာသာစကားပြောသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ဂိမ်းများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ သို့သော် ပို၍ အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာရှိသည် Halloween ညအတွက် PUBG မိုဘိုင်း.
1 PUBG Mobile သည်ဟယ်လိုဝင်းပွဲအတွက်တက်ဆင်သည်
2 ည mode သည် PUBG Mobile သို့လာသည်
PUBG Mobile သည်ဟယ်လိုဝင်းပွဲအတွက်တက်ဆင်သည်
Tencent Games သည်ဟယ်လိုဝိန်းညကိုဘေးဖယ်ထားချင်သည် ၎င်းနှင့်အတူအရေခွံများ၊ ငါတို့အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းနှင့်အတူဤသည်တနင်္ဂနွေအကြီးအအချိန်ရှိသည်နိုင်အောင်နှင့်အချို့သောလက်နက်များအသွင်ပြောင်း။
သူကအရောင်းအ ၀ ယ်များ၏အရေခွံအချို့ကိုသင်မြင်နိုင်သည့်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာဗီဒီယိုတစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည် ဒါဟာ mummy သို့မဟုတ်ဝံပုလွေရှိနိုင်ပါသည်, Erangel အတွက်ညဥ့်အသစ် mode တွင်ထည့်သွင်းထားသော PUBG ရှိဟယ်လိုဝင်းညတွင်လေထုတစ်ခုလုံးကိုဝတ်ဆင်နိုင်လိမ့်မည်။
အမြဲတမ်းလိုပဲ၊ သင်အခုမှအာရုံစိုက်ရမည့်ဟယ်လိုဝင်းပွဲများမှအကြောင်းအရာများကိုသော့ဖွင့်ရန်လိုလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်အဝတ်အသစ်များရရှိရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်လိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းရဲ့ဗီရိုကိုပြောင်းလဲ « Battle Royales »၏စစ်တိုက်။
ည mode သည် PUBG Mobile သို့လာသည်
အကြီးမားဆုံးသောအသစ်အဆန်းမှာ PUBG Mobile သို့ညအိပ်စနစ်ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအရာမှာမိုd်းမလင်းမှီညဥ့်နက်သန်းခေါင်သို့ကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင်၌အချိန်အလုံအလောက်ရှိသည် အချို့သောညဥ့်ရူပါရုံကိုမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးရှာပါ သင်ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိဘဲသင်၏ရန်သူအားတိုက်ခိုက်ရန်၊ အနည်းဆုံးနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်၌တူညီသောမျက်မှန်ရှိသည်မဟုတ်သကဲ့သို့
ဒီည mode မှာအခြားအတွေ့အကြုံများကိုလမ်းပေးသည် ကိုယ်ပျောက်နှင့်မြေပြင်အနေအထားမှတဆင့်မည်သို့မည်ပုံကိုသိ ၄ င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြက်သားညစာကိုအနိုင်ရရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဒီအကြံပြုချက်တွေကိုလက်မလွှတ်ပါနဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်ရန်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောကစားသမားများကြုံတွေ့ရချိန်နှင့်ရက်များနှင့်ရက်သတ္တပတ်များမည်သို့ဖြတ်သန်းသွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရမည်။ သန်း ၁၀၀ ဖြတ်သန်းနိုင်သည့် PUBG Mobile ဖြစ်သည် သာ Google Play Store မှာတပ်ဆင်၏။
ဟယ်လိုဝိန်းညည mode နှင့်အရေးအပါဆုံးသောအသစ်များဖြစ်သောသင်လုပ်နိုင်သည် သင်၏ဘာသာစကားနှစ်မျိုးပြောသောကစားသမားများနှင့်အသင်းများကိုတည်ဆောက်ပါ အဓိက။ PUBG Mobile ဗားရှင်းသစ်တွင်သင်သည်ပထမဆုံးဘာသာစကားနှင့်ဒုတိယတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကစားသမားနှင့်ဆက်သွယ်ရန်သင်၏အသံကိုအသုံးပြုနိုင်သည့်အသင်းများကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဤဗားရှင်းမတိုင်မီအထိသင်ကစားနေသည့်ဆာဗာပေါ် မူတည်၍ သင့်ဘာသာစကားပြောဆိုသောကစားသမားများကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်။ ဥရောပဆာဗာတွင်အာရပ်နိုင်ငံများမှလာသည့်ကစားသမားများလည်းရှိသည် ဆက်သွယ်ရေးအတော်လေးခက်ခဲခဲ့ပါတယ် နှင့်အကျိုးဆက်ပို။ ပင်အောင်ပွဲရယူပါ။ ဒီသေးငယ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုသင့်ရဲ့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အများကြီးဆိုလိုပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့သေးငယ်တဲ့သတင်းအချို့ကိုတခုတခုအပေါ်မှာမှတ်ချက်ပေးရန်ရှိသည် QBU DMR လို့ခေါ်တဲ့လက်နက်အသစ်, Rony ပစ်ကပ်ထရပ်ကားနှင့်ကျပန်းရေဒီယိုတေးသီချင်းများကိုယာဉ်များ၊ ပထမနှစ်ခုကို Sanhok မြေပုံတွင်သာတွေ့နိုင်သည် ဗားရှင်း 0.7.0 ရောက်ရှိခဲ့သည်.
အသေးအဖွဲအပြောင်းအလဲများစာရင်းမှဖြစ်သော်လည်းဂိမ်း၌သင့်ကိုသတ်သူတစ် ဦး ၏စွန့်စားမှုများကိုလိုက်နာရန်ကျွန်ုပ်တို့ယခုကျန်နေခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်eဖြစ်နိုင်သည်စစ်တိုက်ရာတွင်နောက်ဆုံးရပ်တည်မှု၏ဘေးကနေ.
ဒီ update အတွက်နောက်ထပ်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်အပိုင်းတစ်ပိုင်း, AKM ကိုအာရုံစူးစိုက်ပါ မကောင်းသောအကြံအစည်လျော့နည်းသွားသည် ပစ်ခတ်မှုနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးမြှင့်သောအခါ၎င်းသည်တိုတောင်းသောအကွာအဝေးတွင်သာအလုပ်လုပ်သောလက်နက်ဖြစ်တော့မည်မဟုတ်။
အသစ်တစ်ခုကို update ကို PUBG Mobile သည်ထူးခြားသောတိုးတက်မှုများနှင့်ဟယ်လိုဝင်းအတွက် ၀ တ်စုံကိုယူဆောင်လာသည် ညဥ့်ကိုပိုပြီးမှော်နှင့်ပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အချို့သောသင်someကန်အမှန်ယူတော့မည့်ကြောက်လန့်မှုကိုမလွတ်ပါနှင့်၊ ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့ Android ဂိမ်းလိုပဲ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » PUBG Mobile သည် Halloween အတွက် ၀ တ်ဆင်ထားသောဗားရှင်း 0.8.0 နှင့်ဆင်တူပြီးအသွင်အပြင်သစ်များစွာပါ ၀ င်သည်